Hoggaamiyaha Mucaaradka Kenya Oo London Usafray. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
October 12(FMN):Hogaamiyaha Mucaaradka ee dalka Kenya;Raila Odinga ayaa safar ugu kicita may dhanka magaalada London ee dalka Ingiriiska xilli ay meel xun mareyso Xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay natiijada doorashaddii dhawaan dalkaasi ka dhacday oo dhalisay qalalaaso iyo muran siyaasadeed,taas oo ugu danbayntiina keentay in;maxkamada sare ee dalkaasi ay laasho natiijadii cod-bixintaas ku dhawaaqdo doorasho ku celis ah.
Raila ayaa lafilayaa inuu khudbad uu kaga hadlayo marxalada siyaasadeed ee dalkiisu haatan marayo ka jeediyo fagaare bulshadeed ka dhacaya Chatham House, Royal Institute of International Affairs -oo ah Mac’had madax banaan oo dejiya siyaasadaha fadhigiisuna yahay London.
Hoggaamiyaha ururka mucaaradka ah ee NASA,ayaa dhawaan ku dhawaaqay inuu isaga haray tartanka madaxweynenimo ee loo madlanyahay inuu dalkaasi ka qabsoomo 26ka bishan obtober,ayaa lafilayaa inuu dalka dib ugusoo noqdo maalinimda sabtida ah ee inagusoo aadan.
Halkan ka akhriso qodabkan oo faah-faahsan.
Previous Previous post: Af-hayeenkii golaha wakiilada Shacabka ee Itoobiya oo iscasilay.
Next Next post: Itoobiya oo hoos udhigtay Qiimaha lacagta Birta.